မည်သည့် အလှအပရေးဆိုင်ရာနှင့်မဆို ပတ်သတ်သော Member များအတွက် The Faceshop မှ အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ် – YANGON STYLE
မည်သည့် အလှအပရေးဆိုင်ရာနှင့်မဆို ပတ်သတ်သော Member များအတွက် The Faceshop မှ အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံက ပျိုမေတို့မှာ THEFACESHOP ဆိုတဲ့ Brand ကို မသိတဲ့သူရှိကြလား?? မြန်မာနိုင်ငံမှာ Digital ခေတ်မစားခင်ကတည်းက THEFACESHOP Brand က နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ပေါက်ခဲ့တဲ့ Brand ဖြစ်တာကြောင့် ထွေထွေထူးထူး မသိတဲ့သူမရှိလောက်ဖူးလို့တော့ထင်တယ်။
Brand ဆိုတာထက် သူက SkinCare ဖက်ကို နွယ်တယ်။ သူ့ရဲ့ Herbs Day Cleansing Line က နာမည်ကြီးတယ်။ ‌စျေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း ၁သောင်းမကျော်ဘူး။ Cleansing Foam ဆို ၆၈၀ဝ ပဲရှိတယ်။ သဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့ ထုတ်ထားတာဖြစ်လို့ Side Effect ဆိုတာ မရှိသလောက်ရှားတယ်။ သူ့မှာ Skin Care လိုင်းကို Series အစုံရှိတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်အသားအရေ အားဖြည့်ပေးရတဲ့ Skin Care က စတင်လို့ အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါ အသားအရေ လျော့တွဲလာတာတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အထိ Skin Care အစုံရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ Foundation တွေကလည်း သုံးဖူးတဲ့သူတွေအကြိုက်ပဲ။ နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီး ပြောင်းမသုံးချင်လောက်အောင်ကို နာမည်ကြီးတယ်။ အခုလည်း သူတို့ပေးမယ့် ပရိုမိုးရှင်းက အထူးအဆန်းလေးပဲ။ ဒီလိုလေးကြေငြာထားတယ်။
ရည်းစားနဲ့ စိတ်ကောက်တိုင်း ဆံပင်သွားသွားညှပ်တဲ့ ဆံသဆိုင်က Member ကဒ်မှ စတင်လို့ တခြား Cosmetic Brand များရဲ့ Member ကဒ်များကို ပြသပြီးဝယ်ယူလိုက်တာနဲ့ The Faceshop မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပရိုမိုးရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို Member မျိုးတွေအကြုံးဝင်သလဲ??
Cosmetic Brand Member
Beauty Salon Member
Hair Salon Member
Beauty Clinic Member
Head & Beauty Spa
Nail & Foot Spa နဲ့ တခြား ခေါင်းအစခြေအဆုံး အလှအပရေးရာဆိုင်ရာ မည်သည့် Memberများကိုမဆို The Faceshop မှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပရိုမိုးရှင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
The Faceshop ရဲ့ Memberများ ကတော့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ပရိုမိုးရှင်းရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုမိုးရှင်းနေ့စွဲ – 4.10.2019 to
ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး တဲ့။
ကိုယ်က သူတို့ Brand ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အမြဲဝယ်တတ်တဲ့ သူမဟုတ်ရင်တောင် တခြား အလှအပရေးရာဆိုင်ရာ Member Card တွေနဲ့ဆိုရင် Discount ရနိုင်တာဖြစ်လို့ ထူးခြားတဲ့ အစီ စဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအသိပေးလိုက်ပါရစေ။